EKAYAKOBI 4 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EKAYAKOBI 4EKAYAKOBI 4
Ingozi yokuhlobana nehlabathi
41Yintoni edala iimfazwe neengxabano apha phakathi kwenu? Ngokuqinisekileyo zivela kwiinkanuko zenu ezisoloko zisenza imizabalazo ngaphakathi kwenu. 2Xa ungazifumani izinto ozifunayo, ukhetha ukubulala; okanye xa ungafezeki umnqweno wakho, uyaxabana ulwe. Kanti ke, ungazifumani nje izinto ozifunayo, kungenxa yokuba awuziceli kuThixo. 3Noba sowude wathandaza ucela, awuzuzi, kuba kaloku iinjongo zakho zimbi, ufuna nje ukufezekisa iinkanuko zakho. 4Bantundini abangathembekanga, anazi kakade ukuba ngokuhlobana neli hlabathi nizenza iintshaba zikaThixo? Ewe, nabani na okhetha ukuvana neli hlabathi ulutshaba lukaThixo. 5Mhlawumbi ngaba nicinga ukuba iziBhalo ziyalavuza xa zisithi: “UMoya esimnikiweyo uyakhweleta”? 6Kodwa ke sona isisa asinika sona uThixo singaphezulu. Zitsho neziBhalo ukuthi: “UThixo uyabachasa abanekratshi, kodwa unesisa kwabathobekileyo.”Zaf 3:34
7Ngoko ke zinikeleni ngokupheleleyo kuThixo. Mchaseni uSathana azokunibaleka. 8Sondelani kuThixo naye azokusondela kuni. Hlambani izandla zenu, nina bonindini! Nizenze nyulu iintliziyo zenu, nina bahanahanisi! 9Yibani lusizi nilile nintywizise! Ukuhleka makujike kube ziinyembezi, uvuyo lube lusizi! 10Ukuba niyazithoba kuye uThixo, uya kuniphakamisa.
11Mawethu, musani ukugxekana. Nabani na oligxekayo okanye aligwebe elinye ikholwa, ugxeka ugweba umthetho. Ukuba ke uyawugxeka umthetho, akuwuthobeli, koko ungumgwebi wawo. 12NguThixo kuphela umniki-mthetho nomgwebi. Nguye kuphela onelungelo lokusindisa okanye atshabalalise. Kuxa ungubani ke wena ude ugwebe ummelwana wakho nje?
13Makhe ndibhekise kuni nina bathi: “Namhlanje okanye ngomso siya kuya kwidolophu ethile, sifike sihlale unyaka wonke, sirhwebe sizuze imali eninzi.”Zaf 27:1 14Nithetha nje ningayazi into eniza kuba yiyo ngomso. Nifana nje nomfa-nkungu othi uvele umzuzwana nje uphinde uphele. 15Xa nithetha yithini: “INkosi ivuma, siya kwenza le naleya.” 16Kodwa ke endaweni yokwenjenjalo nisuka nibe nekratshi, niqhayise; ibe ke ukuqhayisa yinto egwenxa. 17Phofu ke yena umntu ongayenziyo imfanelo yakhe nakuba eyazi, unetyala.